Ukuhumusha okusheshayo nokunembile kusukela futhi kuye ezilimini ezingu-71 • Textservice Översättningsbyrå
Ukuhumusha okusheshayo nokunembile kusukela futhi kuye ezilimini ezingu-71
Kuyisinqumo esibalulekile ukukhetha inkampani yokuhumusha enokwethenjelwa kanye nenobuchwepheshe. Thina lapha e-Textservice siyakuqonda ukubaluleka kokwendlulisela umyalezo wakho ngokucacile nangokunembile. Ngosizo lwethimba labahumushi bethu abanolwazi, sisiza izinkampani, izinhlangano, amabhizinisi kanye nabantu ngabanye ngokubahumushela kuye futhi kusukela ezilimini ezingu-71. 10% wesaphulelo kumakhasimende amasha!
Abahumushi abafanelekayo bolimi-lwendabuko
Kuyinkampani enhle yokuhumusha, ubumqoka bokuphumelela kwayo yikhwalithi yabahumushi bayo. Abahumushi bethu ngaso sonke isikhathi bangongoti abafanelekayo abanolwazi ngolimi abalukhulumayo abahumushela kulo. Bakhethwa ngokusekelwe olwazini nasemakhonweni abo emikhakheni eyahlukene abayenzayo. Konke ukuhumusha kuyogcinwa kuyimfihlo ngokuphelele.
Amanye amakhasimende sisebenze nawo kuyo yonke leminyaka
wesaphulelo kuyikhasimende elisha
ukwethembela kanye nemfihlo
wesiqinisekiso sokwaneliseka kwekhasimende
Umgomo wethu ukuba ngumlingani wakho ohamba phambili
Inkampani ezoba yi-Textservice yasungulwa ngo-1999 ngomgomo wokuthi inikeze izinkonzo zokuhumusha ezisheshayo, ezethembekile kanye nezifinyeleleka kalula. Isiqubulo senkampani yethu yokuhumusha ukwenza ukuhumusha kwezinga eliphezulu ngesikhashana esincane. Siyazi ukuthi isikhathi sibaluleke kangakanani ebhizinisini; ukwephuza ngemizuzu embalwa-nje kungaba nemiphumela engemihle. Ngakho i-Textservice izibophezele ekwenzeni ukuhumusha ngesikhathi nangamanani akahle.
Ukuba ne-Textservice njengomlingani wakho wokuhumusha, akudingeki ukhathazeke ngezikhathi zokuthunyelelwa umsebenzi, izinga, noma inkokhelo. Senza ukuhumusha kwezinga eliphambili emikhakheni eminingi, ngaphandle kokucindezela amakhasimende ethu ngomsebenzi, ukubhala, ukuwachithela isikhathi, noma ngamanani emba eqolo.
Sizama njalo ukwenza umsebenzi wezinga eliphezulu, futhi senze iphrojekthi ngayinye ngokuvumelana nokufunwa yikhasimende ngalinye. Ugqozi lwethu ngolimi kanye nezinga, kuhlanganise nokunakekela amakhasimende ethu kwezinga eliphezulu, kwenza sihambe phambili kuzo zonke izidingo zakho zokuhumusha.
Uma usebenza nathi, ungaqiniseka ukuthi uthola ukuhunyushelwa okunembile, ukuthunyelelwa umsebenzi ngaphambi komnqamula-juqu, futhi ngenani lokwenza umsebenzi okuvunyelenwe ngalo. Siqinisekisa ukuthi uzoneliseka 100% ngayo yonke iphrojekthi osinike yona.
Kulula njengo 1-2-3!
GCWALISA IFOMU ELINGAKWESOKUDLA BESE ULITHUMELA KITHI
UZOTHOLA IKHOTHESHINI MAHHALA ENEMALI KANYE NOSUKU LOKUTHUMELA UMSEBENZI
SIZOKWENZA OTextserviceLE UKUBA SIKWENZE BESE SITHUMELA UMSEBENZI NGOKUSHESHA